Sida App-ka loogu Sameeyo Lacag La'aana - The Wealth Circle
Bogga ugu weyn Sida App-ka Loogu Sameeyo Lacag La'aan
Sida App-ka Loogu Sameeyo Lacag La'aan
Isha sawirka: Seaasianinfotech.com
Inta badan dadka aan farsamada ahayn ma yaqaaniin sida loo sameeyo app, laakiin dadku markay ogaadaan habka, waxay fahmaan inay waqti badan qaadanayso oo laga yaabo inaysan u qalmin qadarka lacagta ay ku soo celin karaan. Laakiin maqaalkan, waxaad ka heli doontaa dhammaan aqoonta aad u baahan tahay si aad u ogaato sida loo sameeyo codsi tayo sare leh oo bilaash ah si aad uga faa'iidaysato iyo tan ugu muhiimsan adiga oo aan u baahnayn inaad qorto xitaa hal sadar oo kood ah.
Maalmahan, aad bay u adagtahay in la hormariyo app la'aan. Waxaan u baahanahay app loogu talagalay taleefannada casriga ah, shaqadayada, warbaahinta bulshada iyo wax ka badan. Waxaa jira dad badan oo doonaya inay abuuraan app laakiin ma yaqaaniin sida loo sameeyo. Laakiin mahadsanid adiga, maqaalkani wuxuu kuu sheegayaa dhammaan talooyinka iyo tabaha aad u baahan tahay si aad u abuurto software-kaaga oo aad sidoo kale lacag ka sameyso.
Qorshaynta Fikradaada Jirta
Haddii aad hore u lahayd fikrad app ah, tani waxay noqon kartaa tallaabada ugu fudud. Haddii kale, ugu adag. Markaad horumarinayso abkaaga, waa inaad fikrad cad ka haysataa waxa uu samayn doono iyo dhibaatada uu xallin doono. Waa inaad sidoo kale tixgelisaa dhagaystayaasha aad beegsanayso iyo waxa laga yaabo inay soo jiidato. Inaad eegto tartamayaasha ama barnaamijyada aan tartanka ku jirin ee leh isla bartilmaameedka dhagaystayaasha waxay ku siin karaan fikrado wanaagsan oo ku saabsan noocyada apps ee guuleysta oo lacag sameeya. Haddii aadan mid haysan, ha werwerin sababtoo ah weli waxaan ku hagi doonnaa sida aad mid ula imaan karto.
Abuuritaanka Fikrad Cusub
Dhammaan fikradaha app cajiib ah waa natiijada hal-abuurka. Qof kastaa wuu leeyahay, dhammaantoodna waxay rabaan wax badan. Laakiin dhab ahaan, waa maxay hal-abuurku? Sidee buu u shaqeeyaa, sideese ugu fududayn kartaa naftaada?
Hal-abuurka iyo hal-abuurka ayaa baahi weyn loogu qabaa adduunka ay tignoolajiyadu si degdeg ah u horumarayso. Waxaad u baahan doontaa inaad ka faa'iidaysato hal-abuurkaaga gudaha si aad u waafaqdo baahidaas. Ma jiro hab-hal-cabbir-dhammaan-ku-habboon-dhammaan oo lagu imanayo fikrado. Qof kastaa waa gaar, dhiirigelintaaduna waxay ku dhufan kartaa wakhti kasta.
Waa inaad heshaa hab aad ku dheelitirto fikirka hal-abuurka leh hababka fikirka macquulka ah si aad u abuurto fikrado abka cusub oo aad u abuurto abka cajiibka ah. Dhammaan fikradaha app cajiib ah waa natiijada hal-abuurka. Qof kastaa wuu leeyahay, dhammaantoodna waxay rabaan wax badan. Halkan waxaa ah dhowr siyaabood oo aad u aqbali karto si aad fikrado cusub ula timaado:
Falanqee isbeddellada warshadaha si aad fikrado u hesho.
Baar tartamayaashaada oo raadi cilladahooda.
Ka dood fikradaha asxaabta
Sida loo Sameeyo App-ka
Waxa xiga ka dib markii aad ka caddayso fikradda App-ka aad rabto in aad samayso waa habka horumarinta app. Bilaabidda abuurista dhabta ah ee app-ka bilaashka ah sida aan ku ballannay bilowga maqaalka, halkan waxaad haysataa laba ikhtiyaar.
Midda koowaad waa in aad marto dhammaan habka aad adigu u dhiseyso app-ka kaas oo ka kooban labada-dhamaadka hore iyo dhabarka iyo tijaabinta. Haddii aad tan ka fekereyso waxaad horay u sii wadi kartaa oo bilaabi kartaa inaad barato horumarinta software-ka oo aad ka heli karto fiidiyowyo badan oo la soo ururiyey YouTube.
Haddii kale, waxaad isticmaali kartaa app- dhise si aad u daryeesho dhammaan nidaamka adiga.
Waxaan ogsoonnahay inay jiraan dhowr barnaamij oo dhisidda app-ka ah oo halkaas ka jira oo doorashada mid laga yaabo inay kugu adkaato waa markii ugu horreysay ee aan kugula talineyno saddexdan soo socda;
Xitaa dadka aan farsamada ahayn ayaa laga yaabaa inay dhisaan oo qaybiyaan abka iyagoo isticmaalaya mid ka mid ah saddexda goobood ee horumarinta abka. Qalabyadani waxay bixiyaan is-dhexgal isticmaale oo jiid-iyo-hoos u fudud oo kuu ogolaanaya inaad si fudud u aragto habka horumarinta oo aad u qeexdo fikradda hoose si macquul ah.
Waxa aad kor u qaadi kartaa abkaaga mobaylka oo ku shaqayn kara maalmo, haddaysan ahayn saacado, adoo isticmaalaya tignoolajiyadan. Waxaa jira afar tillaabo oo aasaasi ah oo lagu abuurayo abka mobaylka:
Dooro qaabka naqshadeynta
Haddii aad isticmaalayso mid ka mid ah saddexda app- dhise ee sare, doorashada qaab-dhismeedka waa tillaabada ugu horreysa ee habka horumarinta abka mobaylka. Waxaa jira habab ganacsi oo kala duwan oo kala duwan, warshadaha, iyo kiisaska la isticmaali karo.
Sii abkaaga aqoonsi gaar ah
Waxa ku xiga waa in aad hore u socotid oo aad doorato palette midab leh qaab-dhismeedkaaga xiga. Waxaanu ku fududaynaynaa in aanu ku ogolano in aad ku xidhidhiso mareegahaaga iyo abka dhisaha Markaa waxaanu qaadanaynaa midabada aad hore u isticmaashay oo aanu u siinay palette abkaaga ku habboon summayntaada hadda.
Isbeddel ku samee abkaaga oo ku dar xog cusub
Template kasta oo moobilku waxa uu leeyahay waxyaabo aad si fudud u habayn karto si ay ugu habboonaato baahiyaha shirkaddaada. Haddi ay tahay bog anaga ku saabsan oo leh xidhiidhka iyo macluumaadka warbaahinta bulshada ee shirkaddaada, bog adeeg oo daboolaya dhammaan waxa aad bixiso, barnaamijyada daacadnimada, ama foomamka si fudud loo isticmaali karo. Waxaad u habeyn kartaa macluumaadkaaga si aad u abuurto app u shaqeeya nooc kasta oo ganacsi.
Ugu dambeyntii, daabac abkaaga
Hadda oo aad dhammaysay naqshadda oo aad ku dartay nuxurka qayb kasta oo ka mid ah abkaaga, waxa hadhay waa in aad daabacdo. Intaa ka dib, isticmaalayaashu waxay si fudud u soo dejisan karaan abka iOS ama Android talefankooda.
Dhammaan kuwa wax dhisa abka kor ku xusan waxay u oggolaadaan isticmaalayaashu inay galaangal u yeeshaan sahal-sameeyaha abka app- dhisaha oo fududeeya hab-socodka daabacaadda. Kaliya raac tilmaamaha si aad softwarekaaga ugu daabacdo App Store, Google Play Store, ama labadaba.
Intee lacag ayaad ka samayn kartaa app?
App-ka casriga ah waxa uu awood u leeyahay in uu keeno balaayiin doolar sanad walba, laakiin kaliya in yar oo apps ka ah ayaa waligood heerkaas gaadha. Qadarka yaabka leh ee apps-ka casriga ah ayaa ku guul daraystay in ay soo saaraan dakhli. Natiijo ahaan, way adag tahay in la keeno lambar guud oo fiidmeerta ah.
Si aan kuu siiyo sawir wanaagsan waxa aan ka hadlayo, tixgeli tan: 200 ee apps ee ugu sarreeya dukaanka App-ka waxa ay sameeyaan ku dhawaad ​​$82,500 maalin kasta. Markaan balaadhino shuruudahan si aan ugu darno 800ka apps ee ugu sarreeya Google Play Store, qiimaha maalinlaha ah wuxuu hoos u dhacayaa ilaa $3,500!
Tiradani way isbedeshaa iyadoo ku xidhan qaybta. Iyadoo codsiyada ciyaaraha ee ugu caansan ay helaan ku dhawaad ​​$22,000 maalintii, barnaamijyada madadaalada ee ugu caansan waxay helaan ku dhawaad ​​$3,090 maalintii.
Sida Lacag Looga Sameeyo App-kaga Bilaashka Ah
Si aad lacag uga samayso app, waa inaad marka hore abuurtaa mid. Oo haddii aad raacday qodobkan bilawgii oo aad isku dayday inaad isticmaasho mid ka mid ah dhisayaasha app-ka markaa waa inaad qaaday tillaabo dheeraad ah si aad u gaadho ujeedadaada.
Waxaa jira farsamooyin kala duwan oo aad lacag ku samayn karto software-kaaga oo ay tahay inaad sahamiso oo aad baadho. Qaar ka mid ah hababkan ayaa laga yaabaa inay u baahdaan in lagu dallaco macaamiishaada, halka kuwa kalena laga yaabo inaysan. Ma jiro hal-cabbir-ku-habboon-dhammaan xal loogu samaynayo lacag abkaaga, iyo waxa adiga kuugu fiican ayaa gebi ahaanba ku salaysan adeegyada aad bixiso ama qorshahaaga ganacsi. Halkan waxaa ah dhowr siyaabood oo aan isticmaalnay oo aad ku sii socon karto oo aad isku daydo mid ku habboon abkaaga.
1. Xayeysiinta In-App
Tani waa laga yaabaa inay tahay habka ugu fudud uguna caansan ee lacag ka samaynta abkaaga. Ka dib markaad dhammayso horumarinta abkaaga oo aad diyaar u tahay inaad daabacdo, waxaad dooran kartaa inaad oggolaato xayaysiisyadu inay ka soo muuqdaan iyo in kale.
Mulkiilaha abka, waxa lagugu siinayaa magdhow ku salaysan tirada riyooyinka ama gujisyada aad hesho xayaysiimaha, iyo sidoo kale noocyada xayaysiisyada aad bixiso.
2. Iibsiyada Gudaha
Marka loo eego dadka isticmaala, shaqadani waa mid aad muhiim u ah. Isticmaalayaashu waxay heli karaan sifooyin badan ama heerar ka dib markay iibsadaan cusboonaysiinta qaabkan dakhliga.
Qaabkan, abkaagu waxa uu ku siin karaa gunno kasta oo dheeraad ah, macluumaad qiimo leh, lacag dalwaddii ciyaarta, ama furi kara heer kasta oo kale.
Qaabka isdiiwaangelinta ayaa ah mid wax ku ool ah oo siiya heshiis wanaagsan labadaba horumariyaha iyo isticmaalayaasha abka.
Ka dib marka aad dhammayso dhisitaanka abkaaga, waxa laga yaabaa inaad si bilaash ah u siiso isticmaalayaasha kuwaas oo awood u yeelan doona inay galaan qaar ka mid ah nuxurka iyaga oo aan waxba bixin. Isticmaalayaasha ayaa iska qori kara rukhsad lacag ah haddii ay qiimeeyaan abka oo ay qiimeeyaan wax-bixintiisa. Tani waxay siin doontaa iyaga oo aan xadidnayn ama si tartiib tartiib ah u gelaya nuxurka abka.
Farsamo kale oo aad u fiican, laakiin kaliya haddii aad ka heli karto kafaala-qaade leh suuq bartilmaameed u dhigma ama isku mid ah. Waad calaamadayn kartaa abka oo aad bedeli kartaa nakhshad si aad uga tarjumto sumadda kafaala qaadka marka aad hesho kafiilka ugu fiican.
Kahor intaadan bilaabin abka adoo ku hadlaya magaca Shirkadda Kafiilka ama Summada, waxaad u baahan doontaa inaad u qaabayso abka khaaska ah isticmaalayaasha gaarka ah.
5. Barnaamijka affiliate
Shabakadda ku xidhan mobaylada asal ahaan waa madal mobaylada oo isku xidha suuqgeynayaasha mobilada iyo kuwa xidhiidhka la leh hal bog.
Xiriiriyadu waxay u fuliyaan xayaysiis ku salaysan waxqabadka xayaysiiyayaasha, kuwaas oo laga yaabo inay yihiin mulkiilayaasha abka mobaylada ama ganacsiyada ku bixiya alaabada ama adeegyada shabakada moobaylka.
Markaad ku biirto shabakada xidhiidhka la leh moobaylka, waxaad awoodi doontaa inaad lacag ku samayso adoo horumarinaya abka, alaabta, ama adeegyada ay bixiyaan kuwa ku xidhan
Dakhligani wuxuu ku iman karaa qaab kharash-fal fal kasta ah, kaas oo lagu siinayo mar kasta oo uu qof gujiyo xayeysiiskaaga, soo dejiyo software-kaaga, ama sameeyo hawl kasta oo kale (la rabo).
Liiskan siyaabaha aadka u faa'iidada badan ee aad ku shaqayso abkaaga oo aad bilaash ugu abuuri karto waa inay meesha ka saarto welwel kasta oo aad ka qabtey bilaabista ganacsigaaga.
Immisa ayay ku kacaysaa in abka lagu daabaco dukaanka abka?
Qiimaha bilaabista abka wuu kala duwan yahay iyadoo ku xiran goobta. Bakhaarka Google Play Store waxa uu hal mar ka qaadaa khidmad horumariye oo dhan $25, halka Apple App Store uu hal mar ka qaado lacag horumariye ah $99 si uu u sameeyo akoon.
Sida loo ansixiyo fikradahaaga abka?
Waa kuwan qaar ka mid ah talooyinka iyo xeeladaha waxtarka leh ee kaa caawinaya in aad ansixiso fikradaha app-kaaga - Baadhitaan dhammaystiran, baadhista darajooyinka dukaanka abka, xaqiijinta shuruudaha, helitaanka cabbirka cabbirka suuqa aad beegsanayso, horumarinta fahamka habboonaanta-suuqa Abkaaga. Waxaad ku qaadan kartaa wakhtigaaga inaad mar labaad dhex marto labada qaybood ee hore ee maqaalkan.
Lacag ka samaynta apps-ka mobaylada ayaa mar loo arkayey arin khatar ah, iska daa in aad sidaa lacag la'aan ku samayso oo aanad fahmin sida loo codeeyo. Warshadaha, sida waqtiyada, ayaa horumaray. Dadku maaha kaliya inay soo ceshadaan maalgashigooda abka laakiin sidoo kale si qurux badan ugama faa'iidaysanayaan.
Waxaad ku samayn kartaa lacag siyaabo kala duwan, kuwaas oo qaarkood aan u baahnayn isticmaalayaasha app-kaaga inay wax bixiyaan iyo kuwo kale oo ay isticmaalayaasha appku dakhli ku abuuraan. Ma jiro xal hal-beeg ku habboon-dhan-dhan ah, laakiin habab badan ayaa laga yaabaa inay ku habboon yihiin iyadoo ku xiran xaaladda. Kahor intaadan go'aansan jidka aad dooranayso, baar dhammaan xulashooyinka oo xitaa tijaabi qaar ka mid ah naftaada.
Sida Loo Sameeyo Lacag Abuurista Barnaamijyo loogu talagalay Android/ Habraacyada
11 Siyaabo Aan La Faa'iidaysan Oo Lacag Looga Sameeyo Google Play Store
15 Aaladaha Horumarinta App -ka Mobile -ka Bilaashka ah ee Bilowga ah
Sida Loo Noqdo Horumariyaha App 2022
Ma ogtahay inaad lacag dhaqso ah ku samayn karto Steam adiga oo naqshadeeya oo ciyaaraya? Hadda waxaad…
Dad badan oo u hamuun qaba jadwal shaqo oo dabacsan iyo waqti dheeri ah oo ay la yeeshaan qoyska, helidda shaqooyin onleen ah oo sharci ah…
Faallooyinka Acretrader 2022: Maalgashiga Beeraha ugu Fiican Ama Fadeexad?
Ma la yaaban tahay waxa ay dareemeyso in aad leedahay oo aad ka kasbato dhulalka beeraha adiga oo aan ahayn beeraley? Xaq aan caadi ahayn?…